Hery Rajaonarimampianina : “TSY VITA INDRAY ANDRO NY FANARENANA NY 50 TAONA” -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : “TSY VITA INDRAY ANDRO NY FANARENANA NY 50 TAONA”
16/02/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Nandritra ny fitokanana ireo zava-bita teny Sabotsy Namehana, omaly no nilazan’ny Filoham-pirenena, Rajaonarimampianina Hery fa “tsy maintsy tanteraka ny fanamby”. Io fotoana io moa dia nambarany fa fotoanan’ny fifanakalozana, fihainona no mampita ihany koa ny hafatra na vaovao tokony ho ampitaina. Fanamby no natao dia tanterahina ilay izy. Be ny fanamby natao, izay ny fitondrana, izay no fifandraisana amin’ny vahoaka, fifandraisana ao anatin’ny fanamby. Misy tanjona tratrarina dia ireny no ezahana hatrany ny ho tratrarina ary manazava ihany koa hoe inona no mety olana , na lesoka na fomba hanatanterahana an’ireny tanjona ireny. Nafana ny resaka satria tsy fanabeazana fotsiny no nifampiresahana fa teo koa ny ara-toekarena, ny ara-tsosialy hafa ,indrindra fa ny politika, ny fomba fiaraha-miasa.
Mikasika ireo fahavoazan’ny firenena tao anatin’ny taona maro dia nambarany fa “ny firenena izay efa mihapotika tao anatin’ny 50 taona no arenintsika. Aoka tsy ho diso hevitra ny miteny izany fa tsy voaharina ao anatin’ny iray andro ny fahapotehan’ny firenena tao anatin’ny 50 taona. Tsy voaharina ao anatin’ny iray andro ny fotodrafitrasa tokony ho natao nefa tsy natao tao anatin’ny 50 taona. Tsy voaharina ao anatin’ny iray andro, ny fanapotehana niniana natao nisy teto amin’ny firenena ka mahatonga atsika ho tahaka izao. Tsy hitaraina amin’izany anefa isika, tsy Rajaonarimampianina no mitaraina amin’izany. Fa vao mainka aza hampirisika azy hiezaka ao anatin’ny asa izany”. “Ao anatin’ny asa ihany no hahazoana mifandrefy sy mampandroso ny firenena. Raha resaka asa dia mivelatra amin’ny sehatra maro izany. Ao ny fampandrosoana ara-toekarena ny firenena, ataontsika ny fampandrosoana eo amin’ny fambolena, ny fiompiana, ny indostria, ny angovo, ireo fotodrafitrasa maro eto amin’ny firenena ny fampandrosoana ny ara-tsosialy ny fanabeazana sy ny fahasalam-bahoaka”, hoy izy nanitrikitrika.
“Lainga ny filazana fa ho vita vetivety izany”
Nohamafisiny fa “mandainga izay milaza fa ao anatin’ny fotoana fohy dia ho vita izany. Mandainga izay milaza fa manana ny ho enti-manana rehetra isika hatramin’izay fa tsy nato izany. Tsy marina izany fa tsy manana isika. Mbola karohina izany, mbola trandrahina izany! Na dia manana ny harena ananany aza ity firenena ity dia mbola tsy voahodina entina hampandrosoana izany. Isika tsy maintsy misikim-ponitra manodina izany harena rehetra ananantsika izany, manodina ny fahaizantsika sy mampiasa ny fahaizantsika ho amin’ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ny toekarena. Mila fandrindrana izany. Firindrana no ilaina. Mila miaraka mifanome tanana, mila miaraka mamindra isika, amin’ity taona ity dia hihazakazaka mihoatra noho ny efa natao tamin’ny taona lasa isika. Tokony harindra izay fihazakazahana izay”, hoy ny Filoham-pirenena.
“Tsy ny avy any ivelany no manapa-kevitra”
Amin’ny resaka politika dia anisan’ny efa nambaran’ny Vondrona eropeana ny fahafahan’ny tsirairay mirotsaka hofidiana, efa maro ny nilaza fa hirotsaka. Napetraky ny mpanao gazety ny fanontaniana hoe ho tontosa ihany ve ny fifidianana amin’ny taona 2018 sa hisy fiovana? Nambaran’ny Filoham-pirenena mazava tsara hoe “ahoana moa no ilazana fa tsy ho tontosa ilay izy e! Eto amintsika dia lasa miaina fifamendrofendroana, fifanakiviana, fifampihantsiana, indraindray ao anatin’ny tsaho, lainga, ao anatin’ny hevitra maro samihafa no hanaovana adihevitra. Ny momba izany dia anatina adihevitra am-pitoniana raha ilaina izany, ny lalàna koa efa mazava tsara rahateo, ny fipetraky ny lalàna, ny fikarakarana an’izany zavatra rehetra izany dia misy adihevitra hafa ara-politika, heveriko fa zavatra hafa izay. Ny tsara ambara dia firenena manana ny fiandrianany ny firenentsika. Manana ny vahoaka ao anatiny manapa-kevitra. Tsy ny avy any ivelany no manapa-kevitra ho antsika indrindra raha amin’izany resaka safidy izany fa isika tokony ho ao anatin’ny adihevitra. Tsisy afaka hiambo ho tompon’ny hevitra amin’izany”. Mikasika ny fanovana Governemanta dia nambarany hoe “ny mpanao gazety foana no miresaka an’io fa ny Filoham-pirenena mbola tsy niresaka an’ilay izy. Fa izy rehefa miresaka azy dia hataony io”.
Mazava ho azy fa tsy misy intsony ny “ni ni” na ny tsy famelana olona iray hilatsaka amin’ ny fifidianana izay ho filohan’ny repoblika amin’ny taona ho avy, manaiky izany rahateo ny mpitondra ankehitriny satria ...Tohiny